April | 2009 | Mg Ogga's Notes
အလင်းပေးတဲ့ မီးရောင်ကိုသာ ကျေးဇူးတင်နေသူ အမှောင်ထဲကမီအိမ်ရှင်ကို မေ့နေပြီလား အသဲနှလုံးတွေညှိုးနွမ်းနေရဲ့ အနင်းခံမြေကြီး အတွက် ပန်းပွင်တွေ ကြွေကျပေးဆပ်ခဲ့ အမည်မဖော်နိုင်တဲ့နေရက်တွေကို စိတ်နဲ.ရေတွက် ဘ၀ရဲ့ ခါးခါးသီးသီးအတွေ.အထိက ပင်အိုကြီးတွေလို ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ ရင်မှာခိုဝင် တခါတလေ ပဲတင်သံက မူလအသံကိုပြက်ရယ်ပြုနေတာမျိုး ဖြစ်တတ်ရဲ့ လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ ပျင်းရိစွာငြင်းဆိုပြီး စိတ်ရှည်စွာအသက်ရှင်နေထိုင်တော့မယ်သူ။ သူကသူရဲကောင်းတောသူရဲကောင်းပဲ ဒါပေမယ် သူရဲကြောက်တယ်။ Advertisements
April 29, 2009 in ကဗျာ, ခံစားမိသမျှ.
ကျနော်အတွက် တိရ စ္ဆာန်ထဲမှာ ခွေး၊နွားပြီးရင် စတင်သိခဲ့တာ ပုရွတ်ဆိတ်ပါ မူလတန်းအစ သူငယ်တန်းအင်္ဂလိပ်စာ ဖတ်စာအုပ်ရဲ့ ပထမစာမျက်နှာမှာ Ant( အန်.)ပုရွတ်ဆိတ်ဟုအော်ကျက်ခဲ့ရဘူးသည်။ကျနော် နေမကောင်းလို. ဆေးထိုးခံရတော့မယ် ဆိုရင် သားရယ်ပုရွတ်ဆိတ်ကိုက်သလောက်ပါ ပဲဆိုပြီး အမေအားပေးတတ်တယ်။ နောက်မြန်မာစာမှာ ပုရွတ်ဆိတ်နဲ့ နှံကောင်ပုံပြင်အကြောင်းသင်တော့လည်း ဆရာမက ပုရွတ်ဆိတ်လို.အလုပ်ကြိုးစား ဖို.ဆုံးမဖူးသည်။ ပုရွတ်ဆိတ်တွေ ကကျနော်အတွက်တော့စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ သူတို့ဆီက နေပြီးကျနော်တို.တွေ အတူယူစရာတွေ အများကြီးပါ။သူတို.ဟာ ခန္ခာကိုယ်သေးငယ် သော်လည်း ကြံခိုင်မှုကမနိမ့်ပါဘူး။အမြင့်ကနေချ ကြည့်ပါ သူတို. ဘာမှမဖြစ်ပဲနေလိမ့်မည်။ခန္ခာကိုယ်အလေးချိန် က ဧရိဟာထက်စာရင် အလွန် ပေါ့ပါးတာကြောင့် စက္ကူတရွက်လို လေက ပင်တင်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်အမြင့် ကကျကျ သူတို.ကတော့အေးဆေးပဲ။
April 22, 2009 in အက်ဆေး စာတန်း.
Socially Engage Buddhism ဆိုတာ မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာရဲ. အတွေးအခေါ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့သူ က ဗီယက်နမ် ကဇင်ဘုန်းကြီးဆရာတော်ကြီး သစ်နက်ဟန် ဖြစ်ပါတယ်။ Socially Engage Buddhism ရဲ့ အဓိပ္ဖါယ်ကတော့ Buddhist practices + social activism=ဗုဒ္ဓကျင့်စဉ်များကို လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ မှာအသုံးပြုပါမယ်လို. Engaged=ကတိထား၊သစ္စာပြု၊ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်. Buddhism=ဗုဒ္ဓဓမ္မ လူလောကထဲမှာ ပါဝင်ဆောက်ရွက်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ Socially engage Buddhists တွေဟာ ငြိမ်းချမ်းသော ရွှင်လန်းကျန်းမာပြီး တရားမျှတသော လောကကြီးတည်ဆောက်ဖို. စစ်ပွဲတွေ၊ပဋိပက္ခတွေ၊ခွဲခြားဆက်ဆံမှု၊ဖိနှိပ်မှုတွေ၊ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေက လွတ်မြောက်ဖို.၊ဒေါသလောဘမောဟတွေ ဖယ်ရှားပြီး ဥာဏ်ပညာနဲ.ဂရုဏာကို အမြဲကျင့်သုံးဖို့ ဗုဒ္ဓဓမ္မနဲ.ကမ္ဘာပြသာနာတွေကို ဖြေရှင်းနှိင်မယ်လို.ယုံကြည်ကြသူတွေ ကျင့်သုံးကြသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
April 22, 2009 in ဘာသာရေးရာ.
ဓမ္မ၀ိဟာရီ အရှင်ဥာဏ ရဲ့ကံနဲ.လူသားကဗျာလေးပါ လူကိုလူလိုမြင်တယ်ဆိုတာလေးကို သဘောကျလိုပါ ပြန်တင်ပေးပါတယ်။ ကံနဲ့လူသား လူကိုမြင်လျှင်၊ လူလိုပင်၊ လူတွင် ဆက်ဆံရာ။ လူကိုကျော်တွေး၊ လူနှင့်ဝေး၊ လူရေး မလှပါ။ လူကိုဖျက်ဆီး၊ လူ့အချည်းနှီး၊ မပြီး လူ့ကိစ္စာ။ လူကျော်လူဖျက်၊ ထိုနှစ်ချက်၊ လူ့တွက် ဆင်းရဲရှာ။ လူနဲ့လူတို့၊ ချမ်းသာဘို့၊ လူတို့ ပြုရမှာ။
April 21, 2009 in ကဗျာ.
ဓမ္မရသ(ကိုအောင်ဦး)၊၀ိမုတ္တိသုခ၊သစ္စာတရား၊သစ္စာအလင်းတို.စီစဉ်ကြတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပက်သက်သမျှ အချက်အလက်တွေအများကြီးစုပေးထားတဲ့နေရာပါ မနေ.ကမှနှစ်သစ်ကူးအထိမ်းအမှတ်နဲ့ဖွင့်လစ်လိုက်တယ် တရားတော်နဲ့အသံဖိုင်၊ဗီဒီယိုဖိုင်၊ဆောင်းပါများနဲ့ဓမ္မဆိုဒ်လင့်များ ပရဟိတဆိုဒ်လင့်များ၊ပုံတော်များသာမက ဓမ္မစကားဝိုင်းတွေပါတည့်သွင်းထားလို. သာဓုခေါ်စရာပါ သွားကြည့်ချင်ရင် ဒီမှာသွားကြည်ပါ။
April 18, 2009 in သတင်း.
နေ.တစ်နေ.မွေးဖွားလာတယ်။သူအိပ်ယာကနေပုံမှန် အတိုင်းပဲနိုးလာတယ်။ တစ်အိမ်လုံးဘယ်သူမှမရှိ သူတစ်ယောက်တည်း ဒီနေ့ဘာနေလဲ့ပြက္ခဒိန်ကြည်.လိုက်တော့ တစ်နှစ်တာ ဆယ်နှစ်လထဲ က တစ်ခုသောမြန်မာလပြည်နေ့………. သူဘာလုပ်ရမလဲ သူမသိအလုပ်ကလည်းပိတ်တယ်။သူချစ်နေ့ရတဲ့သူကလည်း နယ်ကိုပြန်သွားတယ်။ အိမ်က သူငယ်ချင်းတွေကလည်းသူကိစ္စနဲ့သူသွားကြတယ်။အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိ ပျင်းပျင်းရိရိရှိ လှ၏။ ဘာလုပ်လို.ဘာကိုင်ရမလဲမသိ နောက်ဗိုက်ဆာလာလို. အိမ်အောက်က ထမင်းဆိုင်မှာ ထမင်းကြော် နဲ့ ကိစ္စပြီး အောင် စားလိုက်တယ် စားမကောင်းဘူး။ အိမ်ရှေ့မှာဘစ်(စ်)ကားတွေ အော်သွားတာ ကြားလိုက်ရတယ် “မြေနီကုန်း၊လစ်လမ်း၊မြောက်ဘက်မုဒ် ရွှေတိဂုံ ရွှေတိဂုံ၊ဆောက်လုပ်ရေး ဆူးလေ” ရွှေတိဂုံဆိုပါလား မြန်မာတို.ရဲ့သင်္ကေတ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့နှလုံးသား၊ကမ္ဘာအံ့ဖွယ်တစ်ပါး ဒီရွှေတိဂုံ ဘုရားကို သူမရောက်ဖြစ်တာ ၁နှစ်ကြာပြီ။သူရန်ကုန်မှာအခြေစ ချကတည်းက မရောက်ဖြစ်ခဲ့တာ တစ်နှစ်ကြာပြီ။ အရင်နယ်မှာနေတုန်းက ရန်ကုန်ကို အလည်လာရင်တခါလာ တခါတော့ရွှေတိဂုံ ဘုရားဖူးဖြစ်သေးတယ်။ အခုရန်ကုန်မှာလာနေမှပဲ ရွှေတိဂုံကိုမဖူးဖြစ်တော့တာတစ်နှစ်ကြာပြီ နိုင်ငံခြားက သူသူငယ်ချင်းတွေက သူကိုခဏခဏ ပြောတယ်။ ရွှေတိဂုံဘုရားနဲ့မြန်မာပြည်ကို…
April 18, 2009 in အက်ဆေး စာတန်း.
နှစ်သစ်မှာ ကျနော်ဘလော့ဖတ်တဲ့သူတွေကို နှစ်သစ်မှာဘာလက်ဆောင်ပေးရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားတယ် အမေကိုမနေ.ကပဲ ကတိသုံးခုပေးခဲ့ရတယ်။ ၁။လူများရဲ့ကျေးဇူးကိုမြင်ဖို. ၂။ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ဖို. ၃။ဘာသာရေးပိုလုပ်ဖို. ဒါတွေကိုအမေကိုလုပ်ပါမယ် လိုကတိပေးလိုက်ရတယ်။ ဒီအချက်၃ချက်မှာ ကျနော်အတွက် အခက်ဆုံးက နံပါတ်တစ်အချက်ဖြစ်တဲ့လူအများရဲ့ကျေးဇူးကို မြင်ဖို.ပဲ။ကျနော်ငယ်ငယ် ကတည်းကဖတ်တဲ့စာကလက်ဝဲစာတွေများတယ်ချမ်းသာတဲ့သူဆိုရင်မုန်းတယ်လူတကာကို ဖောက်ပြန်တယ်ပဲမြင်နေတတ်တယ်လူတွေနဲ့အမြဲအဆင်မပြေဘူး။ကျနော်ကြည့်လိုရတဲ့လူ ရှားတယ်။ ဒါကြောင့်ဘယ်သူနဲ့မှမတည့်ဘူး အခုတော့အမေကိုကတိပေးပြီးသွားတော့ တည်အောင် လုပ်ရမှာပေါ့။